Midowga Afrika - BBC News Somali
Posted at 13:21 9 Luulyo 202113:21 9 Luulyo 2021
Posted at 21:47 20 Maajo 202121:47 20 Maajo 2021
Muxuu u tanaasulay ergeygii Midowga Afrika ee Soomaaliya diidday?
Ergaygii ururka Midowga Afrika u magacaabay Soomaaliya ee dhexdhexaadinta khilaafkaadka siyaasadeed oo ah madaxweynihii hore ee Ghana, John Dramani Mahama, ayaa sheegay in uu ka tanaasulay aqbalaadii xilka ergaynimo ee Soomaaliya.
Posted at 15:06 22 Abriil 202115:06 22 Abriil 2021
Dowladda Soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay arrin aysan faahfaahin ka bixinin oo ay sheegtay in dowladaha Kenya iyo Jabuuti ay ka dhex wadaan shirkada IGAD iyo Midowga Afrika.
Posted at 3:52 6 Febraayo 20213:52 6 Febraayo 2021
Posted at 15:48 26 Jannaayo 202115:48 26 Jannaayo 2021
Midowga Afrika oo ugu baaqay Kenya iyo Soomaaliya inay xaaladda dejiyaan
Baaq kasoo baxay ururka Midowga Afrika ayaa labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya looga dalbaday in ay xasiliyaan xiisadda ka taagan xadka.
Posted at 3:17 22 Luulyo 20203:17 22 Luulyo 2020
Al-Bashiir oo maxkamad la soo taagay
Cumar albashiir iyo labaatan la jira ayaa shabag lagu dhex hayey intii dacwadu socotay.
Posted at 4:22 21 Luulyo 20204:22 21 Luulyo 2020
Ka dib markii xal lagu gaadhi waayey wada hadalladii u dambeeyey ee ay yeeshaan Itoobiya, Sudan iyo Masar, ayaa waxa maanta oo Salaasa ah la filayaa in ay hogaamiyeyaasha Afriki kulan maqal iyo muuqaal ah kaga wadaxaajoodaan biyo-xidheenka weyn ee Itoobiya ee la isku maandhaafay ee ay ka dhisayso webiga Niil.
Posted at 2:22 9 Maajo 20202:22 9 Maajo 2020
Dalalka Afrika ayaa waxa ay wajahayaan caqabado dhab ah marka ay iskudayayaan inay kordhiyaan baaritaanka cudurka coronavirus.
Posted at 2:29 5 Abriil 20202:29 5 Abriil 2020
Hub iyo dhar ciidan oo sharci darra ah ayaa lagu qabtay bakhaar uu shaqsi leeyahay oo ku yaalla magaalada Addis Ababa.